E-Journal: March 2009
၁၉၉၇ မတ် ၂၄
ကျနော်ရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးတွေဟာ တမင်တကာ ဖန်တီးယူထားတာထက် သူ့အလိုလို ပွင့်အန်လျှံကျ လာတာက များပါတယ်။ ပြီးတော့ သိမ်းမထားတတ်ပါဘူး။
ကြုံရာမှာရေးပြီး ကျရာမှာထားခဲ့တာများပါတယ်။ ငယ်စဉ်ကတော့ မဂ္ဂဇင်း၊ဂျာနယ်တွေကို ပို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ (အခုတော့ ကိုချောပြောသလို “မောင်ချောနွယ်ကို တည်ထောင်ဖို့ထက် သန်းလေးဆယ်အတွက် ထွန်ယက်ဖို့”အတွက်သာ E-Journal မှာရှိနေတာပါ။) ဒီကဗျာလေးဟာ ကျောက်သင်ပုန်းကြီးပေါ်က ကဗျာလေးတွေထဲက တစ်ပုဒ်ပါ။ အခုဆို ဒီကဗျာလေးဟာ (၁၂)နှစ်သားကြီးတောင် ဖြစ်နေရှာပါပြီ။ တခုတ်တရ သိမ်းထားပြီး တကူးတက ကျနော့်ဆီပြန်ပို့ပေးသူကတော့ ကျနော့်ရဲ့ ချစ်လှစွာသော အနန္တကျေးဇူးရှင် အမေပါပဲ။
အခုပြန်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါ အဲဒီကဗျာလေးကိုရော၊ ကဗျာရေးတဲ့ (၁၇)နှစ်သားကောင်ကလေးကိုရော ဟောဒီ(၂၉)နှစ်သားကြီးက မေတ္တာသက်ဝင်ချစ်ခင်မိပါတယ်။ ကျနော့်နှလုံးသားထဲမှာ အဲဒီကောင်ကလေးရှိသေးရဲ့လား။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီ(၁၇)နှစ်သားကလေးကို ချစ်ခင်လေးစားသောအားဖြင့် သူခေါင်းစဉ်မတပ်ထားတဲ့ကဗျာကို ကျနော် ဝင်ရောက်စွပ်ဖက်ခြင်း အလျဉ်းမရှိဘဲ အရင်းအတိုင်း ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 4:57 PM4comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက ကေဇက် at 2:21 AM5comments
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဖြစ်ပြီးတော့ သန့်သန့်ရှင်းရှင်း မနေတတ်သေးဘူးဆိုရင်တော့ မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ကောင်း သိပ်မပီသသေးဘူး။ နာမည်ပဲ ခံထားတာ ဖြစ်မယ်။
ရဟန်းတွေရဲ့ ဝိနည်းတော်ထဲမှာ သန့်ရှင်းရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်တွေဟာ အင်မတန် များပါတယ်။ တစ်ကိုယ်လုံး သန့်ရှင်းနေဖို့၊ ခြေသည်း၊ လက်သည်း၊ ဆံပင်ကအစ ပါတယ်။ သွားတွေကို တံပူနဲ့ တိုက်ဖို့ ဆိုတာတွေ ပါတယ်။
အစားအသောက် အနေအထိုင် သန့်ရှင်းဖို့ ဆိုတာကို မြတ်စွာဘုရားက အများကြီး ဟောခဲ့တယ်။ သင်္ကန်း လျှော်တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ သန့်ရှင်းဖို့ ဆိုတာတွေ ပါတယ်။ သပိတ်ဆေးတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ သန့်ရှင်းဖို့ အတိအကျပါတယ်။ မပြောင်ရင် အပြစ်ရှိတယ်။
နေတဲ့ထိုင်တဲ့ ကျောင်းမှာ မသန့်ရှင်းရင် အပြစ်ရှိတယ်။ သေနာသနဝတ်ကို မလုပ်မနေရ။ သေနာသန ဆိုတာ နေထိုင်တဲ့ နေရာကို ပြောတာ။ ဝတ် ဆိုတာ ဝတ္တရား။ သေနာသနဝတ်ကို မပြုရင် အပြစ်ရှိတယ်။ အဲသလိုရဟန်း တရားအားထုတ်ရင် တရားထူး မရဘူးတဲ့။
အဲဒီတော့ တရားအားထုတ်တဲ့နေရာမှာ အဆင်ပြေချင်ရင် လုပ်ရမယ့် စည်းကမ်းထဲမှာ သန့်ရှင်းရေး ဆိုတာ ပါနေတယ်။ နောက်ဆုံး ဘယ်လောက်အထိတောင် ပါသလဲ သိလား။ ဝမ်းချုပ်နေရင် အထဲမှာ မသန့်ရှင်းဘူး၊ ဝမ်းနှုတ်ဆေးစားတဲ့။ အဲဒီလောက်အထိတောင် ပါတယ်။
မြတ်စွာဘုရားဟာ တပည့်တွေအားလုံးကို အဆင့်အတန်းမြင့်တဲ့သူတွေ ဖြစ်စေချင်တယ်။ ဒါကြောင့် ရုပ်ပိုင်းသန့်ရှင်းဖို့ စိတ်ပိုင်းသန့်ရှင်းဖို့ကို အသေးစိပ်ဟောခဲ့တယ်။
ဘုန်းကြီးကတွေးကြည့်တယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဖြစ်ပြီးတော့ သန့်သန့်ရှင်းရှင်း မနေတတ်သေးဘူးဆိုရင်တော့ မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ကောင်း သိပ်မပီသသေးဘူး။ နာမည်ပဲ ခံထားတာ ဖြစ်မယ်။
ဆရာတော်ဦးဇောတိက(မဟာမြိုင်တောရ) - အလှတရားမှအမှန်တရားသို့(ပထမအကြိမ်) (စာ- ၁၄-၁၅)
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 4:05 PM3comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တားမြစ် ထားသော... at 12:38 AM4comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တားမြစ် ထားသော... at 7:30 AM6comments
အမှတ်မထင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံလေးနှစ်ခုကနေ မြင်ကွင်းလေးတစ်ခုကိုရေးလိုက်တာပါ….
၂၀၀၉ ခုနှစ် …
မကြာခဏ၀င်လာကြည့်တတ်တဲ့ အထူးကုတွေ၊ ဆရာဝန်တွေ…
ဘေးကနေ မျက်ခြေပြတ်မခံစောင့်ကြည့်နေတဲ့ ဆရာမလေး…
အကောင်းဆုံးဆေးတွေကို ဖခင်ကိုယ်ခန္ဓာထဲကို မရောက်ရောက်တဲ့နည်းနဲ့ ထိုးသွင်းဖိုးကြိုးစားနေခဲ့ကြတဲ့၊ သား၊သမီးဝတ္တရား ကျေချင်ကြတဲ့ သား၊သမီးတွေ…
ခံစားမိတာက သား၊သမီးတို့အနေနဲ့ ငါတို့မှာရှိတဲ့ပိုက်ဆံ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်…
ငါတို့တတ်နိုင်သလောက်၊ တစက္ကန့်… တမိနစ်… တနာရီ… တရက်…
သူသွားရတော့မဲ့အချိန်မှာ သွားခွင့်မရသေးပဲ သား၊သမီးအလိုကျ ဝေဒနာဆက်ခံစားနေရတဲ့ ဘ၀…
ခံစားမိရင်းနဲ့ ၀င်ရောက်လာတဲ့ အတွေးပေါင်းစုံက…
ငါသာ သား၊သမီးနေရာမှာဆိုရင် …
… … … …… …… ………… ……………
ငါသာ အဖိုးအိုနေရာမှာဆိုရင် ……
ငါသာ သား၊သမီးနေရာမှာဆိုရင် ငါ့မိဘကို ဒီလောက်အထိ ပံပိုးပေးနိုင်ပါ့မလား။ ခံစားနေရာတဲ့ဝေဒနာကို ဘာကုသမှုမှမပေးဘဲ ကြည့်နေနိုင်မလား။ ဝေဒနာသက်သာစေချင်တဲ့စိတ်နဲ့ ဝေဒနာကို ဆွဲဆန့်ပေးရက်မလား။
ငါသာ အဖိုးအိုနေရာမှာဆိုရင် သား၊သမီးတွေရဲ့ စေတနာနဲ့မေတ္တာကို နားလည်ပေးနိုင်ပေမဲ့ သွားရမဲ့လမ်းကို ငါသိပြီးသားမို့ ဆက်သွားချင်မိမလား။
ပေးလိုက်ရတဲ့ပိုက်ဆံတထပ် ပြန်ရလိုက်တဲ့ ဘောက်ချာတထပ်၊ ပြန်အပ်လိုက်ရတဲ့အခန်းတခု၊ ငိုကျွေးနေတဲ့မိသားစု၊ အေးစက်နေတဲ့ခန္ဓာတခု ဘာများပြန်ပါသွားခဲ့ပါသလဲ…………
တလနီးပါးကြာသွားတော့ အိမ်အပြန်မှာ လိုက်ပါခွင့်မရတော့တဲ့ တစ်ခြားလမ်းတစ်ခုကို ဆက်လျှောက်သွား သူတစ်ယောက်……
စိတ်မကောင်းစရာ တူညီတဲ့အဖြစ်အပျက်လေး (၂) ခုကနေ
မယ်(10:12 pm, 23.3.09)
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တားမြစ် ထားသော... at 2:53 PM4comments
ဒို့ ကမ္ဘာကြီးကို ချစ်။.....။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တားမြစ် ထားသော... at 12:28 AM4comments
မှတ်ချက်။…..။ စာမရေးဖြစ်တာ ကြာပြီဗျ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အတွေးတွေ မငြိမ်ဖြစ်နေလို့ပါ။ ဒီနေ့တော့ ရေးအုံးမှပါဆိုပြီး ချရေးတော့ အရင်စဉ်းစားထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ အများကြီးက ပေါ်မလာတော့ဘူး။ ဖြစ်နေကျအတိုင်းပါပဲ။ စိတ်ကူးထဲပဲ မှတ်မှတ်ထားတတ်တော့ ရေးကြည့်မယ်လည်းလုပ်ရော ဘာမှမရှိတော့ဘူး။ ဒါနဲ့ပဲ ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ တိတ်ဆိတ်စွာဆူညံနေတတ်တဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ ကျွန်တော့်ကိုယ်ထဲက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စကားစစ်ထိုးနေမိတာလေးကို ချရေးမိပါတယ်။ ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုလည်း ဆရာ-ကိုတာရဲ့စကား ယူသုံးရမှာပဲ။ “တောင်ရောက်မြောက်ရောက်ပေါ့ခင်ဗျား” ။။
ကြာပါပေါ့လား။ ပိုစ့်အသစ်တွေမလုပ်မိတာ။ ဘယ်လိုတွေဖြစ်နေလို့လဲ။ အကောင်းဆုံးတွေများ ဖန်တီးနေလား။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ အသစ်ဆိုတာနဲ့တော့ ဧည့်ခံနေမှလေ။ စာဖတ်သူ စာကိုဆာလောင်သူကတော့ လာကြည့်မယ်ထင်တယ်။ ကြည့်စရာလေးမှမရှိရင် ပရိတ်သတ်ကို စိတ်ပျက်စေမယ်လေ။ အော်.. တစ်ယောက်ရှိရင်လည်း ဒါ- ပရိတ်သတ်ပါပဲ။ အများကြီးလည်း မျှော်လင့်လို့ ဘယ်ရမလဲ။ တွေးမိသမျှ ချပြဖို့ခက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ဒါ- အကြောင်းပြချက်ဖြစ်သွားပြီ။ ဟုတ်တယ်။ အများပြောသလိုဆိုရင် ဆင်ခြေပေါ့။ ပန်းပုဆရာရဲ့လက်မှာ ပုံမပေါ်နိုင်တဲ့ ကျောက်တုံးတို့ သစ်တုံးတို့ မရှိဘူးလေ။ ပြောစရာရှိရင် ပြောလို့ရတယ်။ မြင်တာရှိရင် ပြန်ပြော။ အော်.. အမြင်မတော်ရင်တော့ ကြည့်ပြော။ တစ်ချို့က စိတ်ဆိုးတတ်တယ်။
အင်း.. မလုပ်ဖြစ်ဘူးဗျာ။ မလုပ်ဖြစ်ဆို ပိုစ့်အသစ်လည်းမလုပ်ဖြစ်၊ တစ်ခြားသူတွေရဲ့ စာတွေတောင် လျှောက်မဖတ်ဖြစ်တာ ကြာသွားတယ်။ သိပ်ဖြေရခက်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် လူတွေက ပြောစရာများပြီး ရုတ်တရက်စိတ်မှာ မပြောချင်သေးရင် ဒီလိုပဲ ပြောတတ်ကြလားမသိပါဘူး။ အော်.. “ဒီလိုပါပဲဗျာ” ဆိုတဲ့စကားလေ။ အဲဒီလိုပဲ ဖြေရတော့မှာ။ ဘာရယ်။ ဟားဟ။ အကောင်းဆုံးဆိုတာ ကိုယ်သတ်မှတ်လို့မရပါဘူးဗျာ။ သူများသတ်မှတ်လိမ့်မယ်။ တစ်ခုတော့ရှိတယ်၊ အားရတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့။ နောက်တာပါ။ ဘာအကောင်းဆုံးမှလည်း မလုပ်ဖြစ်ဘူးရယ်။ ဘယ်ဟာမှလည်း အားမရပါဘူး။ အင်း.. ဟုတ်တော့လည်းဟုတ်တယ်ဗျ။ မျက်စိလည်လာတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်။ တမင်တကာ လှည့်လာတာပဲဖြစ်ဖြစ် ရောက်လာသူတွေကိုတော့ စိတ်အဆာပြောစေချင်တာအမှန်ပါ။ ပြောသာပြောနေရတာ အီးဂျာမှာလည်း ပရိတ်သတ်ဆိုတာ ..အင်း၊ ပရိတ်သတ်ပေါ့ဗျာ။ စာတစ်ကြောင်းတစ်လေအတွက် တစ်ယောက်သောသူလောက် စိတ်ကျေနပ်သွားတယ်ဆိုရင်ကို ပျော်သဗျို့။ တစ်ခါတစ်လေကျတော့လည်း စိတ်မှာတွေးမိတာတွေကို ချပြဖို့ခက်နေပြန်ရောဗျ။ စိတ်ရှိတိုင်းသာ ချပြနေရရင်၊ ပုံဖော်ပြနေနိုင်ရင်လည်း ကောင်းသားဗျ။ ဟင်.. ဆင်ခြေပေးတယ်လို့ ပြောချင်တာလား။ အေးဗျာ အများပြောသလို ဆင်ခြေတွေဆိုရင်တော့ အသုံးမဝင်လို့မပေးပါဘူး။ ဟုတ်တယ်လေ ကြက်ခြေထောက်ဆိုမှ သုပ်စားလို့ရအုံးမယ်။ ဟိုးဆရာဟိုး။ ပုံဖော်နိုင်လောက်အောင် အစွမ်းအစနဲ့ ဆရာမဟုတ်ဘူးဗျ။ သူများထုပြီးသား လောကနတ်ရုပ်ချပြရင်တောင် “ဟေ့-ဟေ့ နတ်သားရုပ်ကို စည်းဝါးလိုက်ခိုင်းစရာလားကွ..”လို့ ရုပ်တည်နဲ့ သတိပေးတတ်သူပါဗျာ။ ပြောတော့လည်းလွယ်သားလား။ ပြောချင်တာတွေ၊ မြင်တာတွေရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြောချင်တာကို ပြောလိုက်ရင်၊ မြင်တာကိုအမြင်အတိုင်း ပြောလိုက်ရင် မတော်ပါဘူးဗျာ။ ပြောချင်တာလည်း အဲဒါပဲ။ စိတ်ဆိုးတတ်သူတွေမှာ ကျုပ်ကိုယ်တိုင်လည်းပါတယ်လေ။ ကျုပ်ဘက်ကနေကျုပ် စိတ်ဆိုးလွန်းလို့ တစ်ခါတစ်လေဆို ..အင်း၊ အဲဒီတစ်ခါတစ်လေမှာပဲ ထားပါစို့ဗျာ။ ဘာလို့လည်း မမေးနဲ့အုံးနော် - ဒီလိုပါပဲဆိုတာ ဖြေမှာ။ ကြိုပြောထားတာ။
ပြောလိုက်ရင်တော့ သင့်တယ်ဆိုတာကြည့်ပါပဲ။ စလုပ်လိုက်ဖို့ကျတော့ ခက်နေပြန်ရော။ အခြေအနေ၊ အချိန်အခါဆိုတာနဲ့ စိတ်ဆိုတာတွေကလည်း ခက်သားလား။ ဟုတ်တယ် အဖေနဲ့အမေပေးတဲ့ တစ်သက်စာအမွေအပြင် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် မွေးယူကြည့်မှ တယ်လည်းမလွယ်ပါ့လားလို့ သိရတာ။ အစကတော့ ကိုယ့်အသိနည်းနည်းခေါ် လ္ဘက်ရည်လေးတိုက် မုန့်လေးနည်းနည်းကျွေးလိုက်ရင် ဖြစ်ပြီထင်တာ။ ဟုတ်ရိုးလားဗျာ။ ပေးချင်တယ်ဗျာ။ ပေးချင်ပါတယ်။ လဲနေသူထူဖို့ ကိုယ်တိုင်လည်း မတ်မတ်ရှိနေရမတဲ့။ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က ပေးဖူးတဲ့ဒဿန။ တွေးကြည့်မိတော့လည်း ကိုယ်တိုင်က ခပ်ယိုင်ယိုင်လေ။ နောက်တစ်ချက် ခက်တာရှိသေးတယ်။ လူတွေလေ၊ ကိုယ်ကကောင်းစေချင်လို့ပြောရင် မင်းကရောဘာမို့လို့လဲဆိုတာမျိုး တွေးပလိုက်တာ။ အတော်တော့ ညစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ။ အင်း.. ကျွန်တော်လည်း ဒီအနုပညာနဲ့ ဘဝကိုနေထိုင်ဖြတ်သန်းချင်တာပါပဲ။ ဟုတ်တယ် စာဖတ် စာရေးကို ဝါသနာမပါသေးသူဟာ ဘဝကိုကောင်းကောင်း မနေထိုင်ရသေးတာပါပဲ။
အေးဗျာ.. လုပ်သင့်တာလေးတွေတော့ လုပ်နေရမှာပဲ။ အော်.. ဒီဆင်ခြေတွေက ပါလာပြန်ပလား။ ခင်များမှာ ခင်များနောက်တစ်ယောက် ရှိနေပြီလေ။ နာမည်ဆိုတာ သေသွားတတ်တယ်နော်။ သူ့ကိုမသေအောင် အသက်ဆက်နေအောင်လုပ်ရတာ ပိုခက်သဗျ။ တတ်နိုင်သလောက်လေးတော့ အသိတွေပေးချင်သေးဆို။ ယိုင်တာမယိုင်တာ ပြဿနာမှမဟုတ်တာ။ သူတို့မမြင်သေးတာဆိုရင် ဒါ- အခြားတစ်ဖက်မှ ဆင်ခြင်ခြင်းပဲပေါ့။ လူတိုင်းကိုတော့ ဘယ်စည်းရုံးနိုင်မလဲ။ အိုဘားမားတောင် အတိုက်အခံနဲ့လေ။ ၉၀ရာနှုန်းကျော်တာမှ မဟုတ်တာ။ ကဲ.. ထားပါ။ စာတွေဖတ်ကွ ကောင်းတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ပြန်ချရေးကြည့်။ ဒါလည်း အနုပညာတစ်ရပ်ပဲလေ။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တားမြစ် ထားသော... at 7:46 AM5comments
“ရဟန်းတို့၊ သိမ်းပိုက်ထားရန်မဟုတ်ဘဲ ကူးမြောက်ရန် အကျိုးငှာ ဖောင်ဥပမာရှိသော တရားကို သင်တို့အား ငါဟောကြား၏။ (ဖောင်ဥပမာ ဟူသည်ကား ဖောင်ဖြင့် ရေပင်လယ်ကို ကူးသွားသော ခရီးသည်တစ်ဦးသည် တစ်ဖက်ကမ်းသို့ ရောက်သောအခါ ဖောင်ကို တပ်မက်မနေတော့ဘဲ စွန့်လွှတ်ပြီးလျှင် ခရီးဆက်လက်၍ သွား၏။)
ရဟန်းတို့ ဖောင်ဥပမာကို သိသော သင်တို့သည် တရားမှု(သမထဝိပဿနာ)၌ဖြစ်သော ဆန္ဒရာဂတို့ကိုပင်သော်လည်း ပယ်စွန့်ရမည်။ မတရားမှု(ကာမဂုဏ်)၌ဖြစ်သော ဆန္ဒရာဂတို့ကိုကား ပြောဆိုဖွယ်ပင် မရှိတော့ပေ။”
(မဇ္ဈိမနိကာယ်၊ မူလပဏ္ဏာသ၊ သြပမ္မဝဂ်၊ အလဂဒ္ဒူပမသုတ်)
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 5:26 PM4comments
ဖခင်က သတင်းစာဖတ်ဖို့လုပ်နေတာကို သူ့သားငယ်လေးက နှောက်ယှက်နေတယ်။ နောက်ဆုံး ဖခင်လုပ်သူက စိတ်ညစ်လာလို့ သတင်းစာထဲက ကမ္ဘာမြေပုံပါတဲ့ စာရွက်ကို ဆုတ်ဖြဲလိုက်တယ်၊ ပြီးတော့ မြေပုံစာရွက်ကို အပိုင်းပိုင်းဆွဲဆုတ်လိုက်ပြီးတော့ သားကိုပေးလိုက်တယ်။
- ကဲ အခု သားမှာ လုပ်စရာ အလုပ်ရသွားပြီ။ ဒီကမ္ဘာမြေပုံကို မှန်မှန်ကန်ကန် ပြန်ဆက်ပေးစမ်း။
ဖခင်လုပ်သူက သားတော်မောင်တော့ တနေကုန် အလုပ်ရှုပ်ပြီဆိုပြီး သတင်းစာပြန်ဖတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ၁၅ မိနစ်လောက်ကြာတော့ ကလေးက မြေပုံလေးနဲ့ ပြန်ရောက်လာတယ်။
အဖေလုပ်သူက တအံ့တသြနဲ့ - မင်းမေမေကများ မင်းကို ပထဝီသင်ပေးလိုက်တာလား။ - လို့ မေးလိုက်တယ်။
သားတော်မောင် ပြန်ပြောလိုက်ပုံက - ကျနော်ဖြင့် ဒါကြီးကို ဘာမှန်းတောင် ကောင်းကောင်းမသိပါဘူး။ ဟိုဖက်စာမျက်နှာမှာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဓာတ်ပုံပါတယ်လေ၊ ဒါနဲ့ပဲ ကျနော်က လူပုံကို မှန်အောင်ပြန်ဆက်လိုက်တာ ကမ္ဘာ့မြေပုံကြီးကလည်း ပြန်ဆက်သွားရော။
မူရင်း - Rebuilding the world by Paulo Coelho
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက ကေဇက် at 3:34 AM6comments
ရေအောက်ကဖော်၊ “တိုးအေး” ပေါ်ဝယ်
ထွေးဆဲပိုက်ဆဲ၊ ယုယဆဲ ဟု
တိုးကာ ကပ်ကာ၊ မေ့သည်းချာအား
ရည်တူပြည့်သိပ်၊ “မိခင်စိတ်” ဖြင့်
ဆရာကြီး ဦးသုခ ၏ မင်္ဂလသုတ်အဖွင့်(စာ-၁၂၃-၁၂၅)တွင် ဖတ်ရှုခဲ့ရသော ရင်နင့်ဖွယ်ရာ မိခင်မေတ္တာဖွဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၇၃ ခုနှစ် ရန်ကုန်-ဒလအကူး တိုးအေးသင်္ဘောနစ်မြုပ်စဉ်က တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန်တစ်ခုကို မြဝတီမဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာအဖွဲ့ဝင် ကဗျာဆရာ ဆရာသမိန်သောင်း ရေးဖွဲ့ခဲ့သည်ဟု သိရပါသည်။ မူလက မည်သည့်ဂျာနယ်၊မဂ္ဂဇင်းတွင် ပုံနှိပ်ဖော်ပြခဲ့ကြောင်း မသိရပါ။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 6:52 PM6comments
နာကျင်မှုကိုမှ အနုပညာဖြစ်အောင် ကျင်ယူနေရှာတဲ့
ကဗျာဆရာ မိုးလှိုင်ည ရဲ့ ကျွန်တော်ကြိုက်သော ကဗျာများ မှာ ဖတ်ခဲ့ရတဲ့ ကဗျာပါ။
ကြိုက်လွန်းလို့ ပြန်လည် မျှဝေတာ သက်သက်ဖြစ်ပါတယ်။
ပုဂ္ဂိုလ်ခင်လို့ တရားမင်တာ မဟုတ်သော်ငြား ဒီလိုကဗျာဆရာတစ်ဆူ အတွက် ဝံ့ကြွားဂုဏ်ယူတာ အမှန်ပါ။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 2:15 PM4comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 10:26 PM4comments
ငယ်ငယ်တုန်းက . . .
လွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်လောက်ကစပြီးကျွန်မဟာ "ကျေးဇူးတင်ပါတယ်" ဆိုတဲ့စကားကို တွင်တွင်သုံးတတ်လာခဲ့ပါတယ်….
"ကျေးဇူးတင်ပါတယ်" ဆိုတဲ့စကားကို ပြောဖို့ ၀န်မလေးတတ်ခဲ့ဘူး…
Taxi ငှားစီးရင်တောင် ပိုက်ဆံပေးစီးတဲ့Taxi သမားကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမြဲပြောခဲ့တာပါ…
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားကို တာဝန်တခုအနေနဲ့ ပြောမိတာလား???
သေချာတာကတော့ စိတ်ထဲမှာပါသည်ဖြစ်စေ…မပါသည်ဖြစ်စေ…. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ပြောလိုက်ရင် အပြောခံရသူရဲ့စိတ်ထဲမှာ ကျေနပ်သွားစမြဲပါပဲ…
တခါတလေ တနေကုန် "ကျေးဇူးနော်"… "ကျေးဇူး"… "ကျေးဇူးတင်ပါတယ်"….
"Thank You နော်"… မရိုးနိုင်… မမောနိုင်လောက်အောင်ကိုကျေးဇူးတင်နေခဲ့ရတယ်….
တနေ့ မမျှော်လင့်ပဲ ကျွန်မတို့ရဲ့ မမနဲ့ ထမင်းတ၀ိုင်းတည်းစားဖြစ်တယ်…
မမက သူငယ်ငယ်က မာသာတွေနဲ့ နေခဲ့ရတာတွေကိုပြန်ပြောပြရင်း
တရက် သူ့ကို ကားတံခါးလာဖွင့်ပေးတဲ့ Boy ကို “Thank You!!!” လို့ ပြောလိုက်တာကို မာသာကကြားသွားပြီး “You don’t need to say thank you. He is doing his duty” ဆိုပြီးမာန်တာခံရတယ်တဲ့….
ကိုယ်အလုပ်ကိုယ် လုပ်နေကြတယ်ဆိုပေမဲ့ စေတနာနဲ့ လုပ်ပေးချင်တဲ့စိတ်နဲ့ လုပ်ပေးတာကတော့ လုပ်ပေးရတဲ့သူကော လုပ်ပေးခံရတဲ့သူပါ စိတ်ချမ်းသာရမှာပါ….
ကျွန်မအနေနဲ့ လည်း "ကျေးဇူး" ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဆက်သုံးဖြစ်နေဦးမှာပါ…
*** အမှန်ကတော့သူ့ကိုသတိရမိလို့ သူနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးတခုကိုချရေးမိတာပါ
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက မယ် at 11:57 PM4comments
အနှိုင်းမဲ့ ပန်းချီကား ဟာ အမေခြယ်မှုန်းတဲ့ ကျနော်တို့ မောင်နှမလေးယောက်ရဲ့ ငယ်စဉ်ဘဝပန်းချီကားဆိုရင်…
ဒီကဗျာဟာ အမေရေးဆွဲတဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ လက်ရှိဘဝပထဝီဝင်ပါပဲ။
ပင်လယ်အော်တွင်းတူဆုံဆင်းစရာ ကျနော်တို့ရဲ့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဟာ ဘယ်ဆီမှာလဲ...
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 7:03 PM2comments
“အချစ် # ဘဝ”
ပန်းသဇင်လို နန်းတော်ဝင် မဖြစ်ရလဲ
အဆင်းမရှိလည်း အချင်းကတော့ ရှိနေဆဲပါလေ။…..။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Rhyme at 8:41 AM4comments
ကိုလိုနီခေတ်က မြန်မာလူငယ်ပညာတတ် အမြောက်အမြားဟာ မိမိတို့ကိုယ်ကို ကျောင်းဆရာဘဝမှာ မြှုပ်နှံကြတယ်။ မြန်မာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဟာ ပညာရေးနဲ့တွဲနေရမယ်။ ပညာရေးအားဖြင့် အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်ကို ဖော်ထုတ်မြှင့်တင်နိုင်မယ်။ ပညာရေးအားဖြင့် လွတ်လပ်မှုအတွေးအခေါ်ကို ဖြန့်ချိနိုင်မယ်။ လွတ်လပ်တဲ့အခါ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး အုပ်စိုးနိုင်အောင် အသိပညာ၊ အတတ်ပညာနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့နိုင်ငံသားကောင်းတွေကို ပညာရေးနဲ့သာ မွေးထုတ်ပေးနိုင်မယ်။ အဲလို ယုံကြည်ကြတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့အစည်းအရုံးအတွက် စံနမူနာပြ မြန်မာအမျိုးကောင်းသား ဦးသန့် - (ရည်မွန်) - မြန်မာသစ် ရသစုံ မဂ္ဂဇင်း အမှတ် (၄)၊ ဇန်နဝါရီ ၂၀၀၉
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 9:07 PM4comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တားမြစ် ထားသော... at 3:19 PM3comments